Rivaldo oo sharad ku galay kooxda guuleysan doonto kulanka Madrid Derby ee Sabtida ka dhici doono Santiago Bernabeu – Gool FM
(La Liga) 28 Sab 2018. Ciyaaryahankii hore reer Brazil iyo kooxda Barcelona ee Rivaldo ayaa ku sharatamay kulanka Madrid Derby ee horyaalka La Liga ay Sabtida ku wada ciyaari doonaan kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid.
Rivaldo ayaa ku dooday in kooxda Real Madrid ay kaga adkaan doonto 2-1 dhigeeda Atletico Madrid kulanka ay Sabtida ku wada ciyaari doonaan garoonka Santiago Bernabeu.
“Real Madrid waxay ku ciyaari doontaa garoonkeeda Santiago Bernabeu waxayna isku dayi doontaa inay kaga faa’ideysato jamaahiirteeda, si ay halkeeda kaga sii wado cadaadiska hogaanka horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan”.
“Laakiin waxay lla tahay in Real Madrid ay kaga gudbi doonto imtixaankan adag ee kulankan Madrid Derby isla markaana ku guuleysan doonto 2-1”.
Dhinaca kale Rivaldo ayaa kahor kulanka Madrid Derby amaan kala dul dhacay laacibka ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Marcelo, wuxuuna sheegay inuu yahay xidig kusoo guuleestay koobab badan isla markaana aanan loo baahneen inuu muujiyo awoodiisa ciyaareed, kadib markii uu la kulmay dhaleeceen tan iyo bilawga xili ciyaareedkan.
Zidane oo ku mashquulsan barashada luqada ingiriiska iyo jah wareerka Mourinho oo halkiisa kasii socda